Zithini iimpazamo? | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 16/07/2021 22:51 | Oomama
Kuqhelekile kubafazi abaninzi kwiiyure ezingama-48 emva kokubeleka, ube nokuqina okuqinileyo esibelekweni. Ezi zinguquko zibizwa ngokuba ziimpazamo kwaye zinzima kakhulu kwaye zibuhlungu.
Ezi zinto zichazwe ngasentla ziqhelekile kwaye zibangelwa yinto yokuba isibeleko kufuneka sibuyele kubungakanani bendalo. Kwinqaku elilandelayo siza kuthetha nawe ngendlela eneenkcukacha malunga nokungalunganga kwaye ngokubaluleka kwabo ekubuyiseni ngokupheleleyo umfazi ozele umntwana.
1 Ubudlelwane phakathi kokungalunganga kunye nokuncancisa
2 Intlungu yokwenza okungalunganga
3 Kutheni iimpazamo ziyimfuneko
Ubudlelwane phakathi kokungalunganga kunye nokuncancisa
Kukho ubudlelwane ngokuthe ngqo phakathi kwezi zibeleko zesibeleko kunye nokuncancisa. Ngalo lonke ixesha usana luthatha ibele, umzimba womfazi ukhupha i-hormone i-oxytocin, ekhokelela kwiimpazamo. Kungenxa yoko le nto ukuncancisa kubalulekile xa kuziwa ekutywinweni kwemithambo yegazi efumaneka kwisibeleko kwaye thintela ukuphuma kwegazi ngaphakathi.
Intlungu yokwenza okungalunganga
Ukungahambelani komzimba kubuhlungu kwaye kunzima kakhulu kwisibeleko esivame ukuphela ukuya kwiiyure ezingama-48 emva kokubeleka. Kwimeko apho iintlungu zomelele ngokwaneleyo, umfazi angathatha ibuprofen ukunceda ukunciphisa iintlungu ezinjalo. Ezi mpazamo zidla ngokwenzeka ngamathuba amakhulu okuvela kumntwana wesibini. Bambalwa oomama abatsha abanesifo sokuphika emva kokubeleka.
Okukhona abantwana bebaninzi, kokukhona kunokwenzeka ukuba bahlupheke kwezi zinto zikhankanywe ngasentla. Intlungu iya kuxhomekeka kwinqanaba elikhulu ukuba ngowasetyhini ngumntwana wakhe wokuqala okanye ukuba, ngokuchaseneyo, sele efumene izihlandlo ezininzi. Kwimeko apho umfazi kukuzalwa kwakhe kokuqala, Iintlungu ezivela kumdaka zithambile, zikhumbuza ukuba sexesheni.
Kwimeko yokuzala amawele okanye usana olunobunzima obukhulu, iintlungu zokungalunganga zinamandla kwaye zinamandla. Kwiimeko ezinjalo iintlungu zibaluleke kakhulu, ke bahlala befuna ukuthatha uhlobo oluthile lwamayeza ukunceda ukuthomalalisa iintlungu zangaphakathi.
Kutheni iimpazamo ziyimfuneko
Okokugqibela, kuya kufuneka kuboniswe ukuba okungalunganga kuyimfuneko kunye nendalo, kuba kungenjalo, Umfazi osandula ukuhlangulwa unokufumana ukopha ngaphakathi okungabeka ubomi bakhe emngciphekweni. Kubalulekile ukuba emva kokubeleka, isibeleko sibuyela endaweni yaso size sibuyele kubungakanani bendalo. Oku kuncipha kuyanceda ukuba kwenzeke kwaye akukho ukopha ngaphakathi.
Ngamafutshane, umfazi ozele umntwana wakhe, akufuneki ukhathazeke nangaliphi na ixesha malunga nokuba nokuqina okuqinileyo okanye imibimbi ngaphakathi kwesibeleko sakho. Oku kuncitshiswa kuyimfuneko ukuze isibeleko sikwazi ukuzikhulula ngaphandle kweengxaki zamathambo ekusenokwenzeka ukuba ashiyekile ukuba abangele ukuhanjiswa.
Khumbula ukuba indalo kufuneka ithathe indawo yayo kwaye kubalulekile ukuba isibeleko sifuduswe kwaye sandisiwe ngenxa yokukhulelwa, gqibezela ngokubuyela kubungakanani bayo bendalo kunye nokuzibeka ngokwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Zithini iimpazamo?